Ukukhanya kwezikhukhula zohlobo lwakudala kunye neendlela ezahlukeneyo zeqokobhe. Ukuveliswa kwemveliso yealuminium esemgangathweni ophezulu. Nokumelana Execellent kunye nokuqhekeka anti. Akululanga ukuphela, ukusasaza ubushushu okukhulu. Yenziwe ngeglasi yokuqinisa ephezulu ebonakalayo, ukuhambisa ukukhanya okuphezulu njenge-98%, akukho lula ukwahlula ukukhanya kuqaqambile kwaye kuyalingana. Uyilo olomeleleyo lokuhambisa umoya, iitshipsi ezininzi ukusasaza kobushushu. Umzimba wesibane odityanisiweyo, uxinzelelo oluphezulu, umhlwa, ukumelana nokuqhekeka, uyilo lwamanzi.
Ngokukodwa kusebenza: ukukhanya kwangaphakathi kwangaphakathi, ukukhanya komhlaba, ukukhanya kwebhodi yebhodi, igaraji, izixhobo ezizodwa ezikhanyisa njengezonyango, imivalo, iiholo zokudanisa kunye nezinye iindawo zokukhanyisa ukuzonwabisa njalonjalo.
Ubushushu be-1.Color: Uluhlu lwamaqondo obushushu obuqhelekileyo obu-2800-7000K, kubandakanya iimfuno zokukhanya okufudumeleyo kunye nokukhanya okubandayo kuluncedo.
Ingelosi ye-2: I-angle ye-120 ° ye-beam angle, i-shadow-free kunye ne-anti-glare, ukubonelela ngokukhanyisa ngokufanelekileyo kwindawo yakho enkulu. Isibiyeli esenziwe ngentsimbi esingu-180 ° senza ukuba ukukhanya kuzinze kwaye kubhetyebhetye.
Sebenzisa ixesha lokuphila: ngaphezulu emva koko i-30000H
Umbane wokufaka: 100-240V
Amandla alinganisiweyo: 10w / 20w / 30w / 50w / 80W / 100w (Kufuneka amandla aphezulu abe ngumbuzo nangaliphi na ixesha)
Ekubhobhozeni 3.Luminous: 75LM / W.
Imodeli ye-1 eqhelekileyo yokusetyenziswa kwesiqhelo
Uthotho lokukhanya kwezikhukula ze-2.RGB
I-3.Floodlight ene-PIR sensor
4.Have uyilo lwembonakalo eyahlukileyo
Ubomi benkonzo ende kunye nofakelo olulula: irediyetha yomkhombe inyusa indawo yokunxibelelana nomoya, ikhawulezisa ukusasaza kobushushu kwaye yandisa ubomi benkonzo yezibane nezibane. Izibane zokusebenza zangaphandle zinokufakwa eludongeni, eluphahleni okanye emhlabeni, inkxaso yomelele kwaye iyahlengahlengiswa. Kwaye inokufakwa ekhaya, ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa.
2.Ukukhusela kunye nokugcina amandla: Olu luhlu lwe-IP65 lwangaphandle olukhokele kwizibane zezikhukula, lusindisa ngaphezulu kwe-85% kwityala lakho lombane.
I-Intsllation elula kunye newaranti: Flexible ngokwaneleyo kwaye kulula ukuyifaka kunye ne-180 ° isibiyeli sesinyithi esiguquliweyo sophahla lwentaba, i-Wall-mount kunye ne-Ground-mount. Kwaye sineMinyaka emi-2 yesiQinisekiso.
Egqithileyo Ukukhanya koMkhukula weJFF ngeBhokisi yeJunction
Iibhetri ezixhaswe ngokuKhanya kweziLayiti eziKhanyayo
Ukukhanya koMkhukula oPhathekayo
Izibane ezikhuselekileyo zoMkhukula
UkuKhanya koMkhukula oKhanya ngokuKhanya kwakhona
Izibane zeZikhukhula ezihlawulekayo
Izibane zeZikhukula ezinokugcwaliseka